प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदारले समयमै बाटाे नबनाएपछी स्थानीयहरुले टाँसे ठाउँ ठाउँमा फोटो! सेयर गरौ – Life Nepali
प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदारले समयमै बाटाे नबनाएपछी स्थानीयहरुले टाँसे ठाउँ ठाउँमा फोटो! सेयर गरौ
काठमाडौं । प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारीले नगरकाेटकाे बाटाे समयमा नबनाएपछी स्थानीयहरुले ठेकेदारकाे फाेटाे ठाउँ ठाउँमा टाँ’सेर युवाहरुले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको वि’राेध गर्ने नयाँ शैली अपनाएका छन् , तस्बिर सिधाकुरा दिपक बोहराको फेसबुकबाट साभार थप समाचार न्युज24 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नि’मन्त्रणामा बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुला हमिद नेपाल भ्रमाणमा छन् । उनको स्वागत गर्न उनी हिड्ने शहरका सबै सडक र चोकहरुमा उनको फोटो राखिएको छ । यसैक्रममा आज नगरकोटमा पनि ठाउँठाउँमा फोटोहरु राखिएको छ तर, बंगलादेशका राष्ट्रपतिको भने होइन । वर्षौंसम्म सडक नबनाउने शै’लुङ क’न्स्ट्रक्सनका मालिक तथा श’क्तिशा’ली ठे’केदार शारदा अधिकारीको ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले बर्षौंसम्म सडक नबनाएको आ’क्रोस स्था’नीय युवाहरुले पोखेका हुन् । सात बर्षसम्म सडक नबनाउने ठेकेदारलाई सबैले चिनून भन्नका लागि आफूहरुले वि’रोध स्व’रुप ठेकेदार अधिकारीको फोटो भएको पोष्टर ठाउँठाउँमा टासेको उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीयहरुले टाँसेका पोष्टरमा ठेकेदार अधिकारीको फोटोसँगै कु’कुर र बा’दरको फोटो पनि टाँसिएको छ । सरकारले २०२० लाई पर्यटन बर्ष मनाउन उद्घोष गरिरहेको समयमा काठमाडौंबाट नजिकै पर्ने नगरकोटको सडक बनाउन चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयहरु आ’क्रोसित बनेका हुन् ।
भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने पर्यटकीय स्थल नगरकोट जाने सडकको ठे’क्का स’म्झौता भएको सात वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत निर्माण सम्पन्न हुने छाटकाट छैन । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो सडकखण्ड २०७० सालमा १७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सै’लुङ क’न्स्ट्रक्सनले ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । तर, ठ’केदारले समयमा काम सम्पन्त्र नगर्दा स्थानीयहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ । यति मात्र होइन यही सडककै का’रण नगरकोट जाने पर्यटकहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छ ।
Previous नोबेलमा लगाइयो यस्तो कृत्रिम आँखा बिरामी म’ख्ख, देख्ने छ’क्क हेर्नुहोस् भिडियो सहित !
Next एनसेलले ल्यायो गजबको अफर ‘अल नेटवर्क भ्वाइस प्याक’!